देश बेच्ने नेतालाई जुत्ताको माला लाउनुपर्छ भन्दै इन्द्रेणीका कृष्ण कडेंल गर्जिए ! स्टेजमै मन्त्रीलाई चेतावनी दिए (भिडियो हेर्नुस) – PathivaraOnline
Home > भिडियो > देश बेच्ने नेतालाई जुत्ताको माला लाउनुपर्छ भन्दै इन्द्रेणीका कृष्ण कडेंल गर्जिए ! स्टेजमै मन्त्रीलाई चेतावनी दिए (भिडियो हेर्नुस)
भारतले सार्वजनिक गरेको नक्साअनुसार कालापानी क्षेत्रको मात्रै ६२ वर्ग किलोमिटर क्षेत्र परेको छ । यस्तै लिपुलेकबाट आएको नदीदेखि लिम्पियाधुरातर्फबाट आएको नदी क्षेत्रको झण्डै ३१० वर्ग किलोमिटर क्षेत्र मि नक्साभित्र समेटेको छ । यसैबिच चर्चित कार्यक्रम इन्द्रेणीका सँचालक कृष्ण कडेंलले देशको सिमा बेच्ने नेतालाई जुत्तााको माला र कालो मोसो दल्नुपर्ने बताएका छन् । उनले महिला मन्त्रीलाई स्टेजमै यस्तो चेतावनी दिए ।